အဆိုပါ Las Vegas မှ SuperMeet စျေးပြိုင်အဆိုပြုလွှာ Farewell - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » အဆိုပါ Las Vegas မှ SuperMeet စျေးပြိုင်အဆိုပြုလွှာ Farewell
စပ်လျဉ်း, ကွန်ယက်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရွယ်တူချင်းအတူအနည်းငယ်ကော့တေးနှင့်ပါတီများခံစား၏ 18 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးအထင်ကြီးပြေးပြီးနောက်နှစ်ပတ်လည် Las Vegas မှ SuperMeet တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ SuperMeet Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်အသိုင်းအဝုိင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်းသင်ယူဖို့မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းကွန်ရက်များနှင့်ရှယ်ယာစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်, ပညာရေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်ကိုအလုံးစုံတို့အဘို့ပျော်စရာနှစ်ဦးစလုံးသောလူမှုရေး setting ကိုအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအခွင့်အလမ်းပေး NAB ညီလာခံ၏ 18 နှစ်ပေါင်းအတိတ်။ လာသောအခါ Las Vegas မှာအဆိုပါ SuperMeet "To-do" ဟုအဓိပ္ပါယ်ပဲ!
ဒံယလေသ Berube ၏စားပွဲခုံကနေ:
အများကြီးစဉ်းစား, ဆွေးနွေးမှုနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှာဖွေပြီးနောက်, မိက္ခေလနှင့်ငါနှစ်ဦးစလုံးကျနော်တို့ကသီးခြားလမ်းကြောင်းအပေါ်တိုးသွားကြသည်သဘောတူညီခဲ့ပါပြီ။ ကျနော်တို့ကနောက်ဆုံးဆယ်ရှစ်နှစ်များအတွက်အတူတကွသူတို့ကိုပူးတွဲထုတ်လုပ်သည်အတိုင်းကို SuperMeets မှနှုတ်ဆက်လေလံဆွဲရန်အဘို့အဒါဟာအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ NAB မှာသို့မဟုတ် 2019 ၏ကျန်များအတွက် SuperMeet ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
တစ်အံ့သြစရာများနှင့်လည်းရွှင်လန်းခရီးဒါဟာဖြစ်ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်တီးမှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကြွအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်စစ်မှန်သောဇာတ်ကြောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်အဘယ်အရာကိုထုတ်လုပ်ကြအလွန်အမင်းဂုဏ်ယူနှင့်ကျေးဇူးတင်ရပ်တယ်။ ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာသင်စရာမလိုဘဲ, သင်၏ရက်ရက်ရောရော, ရိုးရှင်းသောထောက်ခံမှုမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ SuperMeet သမိုင်းမှတ်တိုင်များအောင်မြင်ပါပြီနိုင်ဘူး။
ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့သင်တို့သလောက် SuperMeets ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့, သငျသညျကြှနျုပျတို့၏နှလုံးပါကျေးဇူးတင်။ သင်တည်ဆောက်သို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုသင့်ရဲ့သင်ကြားမှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးနှင့်တကွ, အနှစ်တဆင့်လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏မထိကူညီပေးခဲ့သည်, နှင့်သင်ဖြေရှင်းနိုင်ဆက်လက်လုပ်ငန်းအသွားအလာပြဿနာများနှင့်အတူထိုကောင်းမွန်သောခံစားကြရသည်။ ကျနော်တို့ကိုအစဉ်အမြဲသင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြနှိမ့်ချနေကြသည်။ ကျနော်တို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်နှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်မြင့်မားတဲ့လေးစား၌သင်တို့ကိုတန်ဖိုးထား။ ပညာရှိတဲ့လူကိုပြောခြင်းတို့နဲ့ဖို့, "အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်နောက်ဆုံးတွင်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပုံပြင်ကိုရပ်တန့်မယ့်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ "
အသံလွှင့်မှာကျနော်တို့မဂ္ဂဇင်း, အ SuperMeets အပေါငျးတို့သတဲ့အမှတ်ရစရာများနှင့်ပျော်စရာအတှေ့အကွုံရာ၌ခန့်ထားပြီတော်မူသောငါတို့၏မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဆန္ဒရှိ Beat! ကျနော်တို့ကဒီဇာတ်လမ်းကိုဖို့နောက်ဆက်တွဲကြုံနေရ, တနေ့မျှော်လင့်!
အဆိုပါကို Creative Pro ကိုအသုံးပြုသူအုပ်စုအကြောင်း
ကို Creative Pro ကိုအသုံးပြုသူအုပ်စု (CPUG) ကွန်ရက် SuperMeets နောက်ဆုံးဖြတ်, Adobe က၏စုဝေး networking နေကြတယ်, လွန်စွာလိုလားသော နှင့် Autodesk အယ်ဒီတာများအသုံးပြုသို့မဟုတ်ပါ Macintosh-based ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် workflow နှင့်ဖြေရှင်းချက်သုံးစွဲဖို့သင်ယူဖို့လိုသူကမ္ဘာအနှံ့ကနေဂုရုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး။ SuperMeets ဒေသခံတစ်ဦးအဆင့်မှာ Apple က FCP အယ်ဒီတာများချိတ်ဆက်ရန်အခြေခံလူတန်းစားလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့သူ့ရဲ့ဆယ်ရှစ်နှစ်တွင်, SuperMeets တကမ္ဘာလုံးဒေသခံအခန်းကြီးများ၏စွမ်းအင်နေရသည်ခဲ့ကြပြီးကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖြစ်ရပ်များ၏စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့သြဇာအရှိဆုံးအသုံးပြုသူ-စည်းရုံးစီးရီးသို့လှည့်ထားသည်။
SuperMeets Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်အသိုင်းအဝုိင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသင်ယူ, ဒါပေမယ့်, ပညာရေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ပျော်စရာနှစ်ဦးစလုံးသောလူမှုရေး setting ကိုအတွက်ကွန်ယက်နှင့်ရှယ်ယာစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုမှသာမဟုတ်ဘဲအခွင့်အလမ်းများကို!
အဆိုပါ SuperMeet အစီအစဉ်များသောအားဖြင့်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်၏အသုံးပြုသူမောင်းနှင်ပို့လိုက်ကြတယ်ပါဝင်သည်နှင့် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနဲ့ content ဖန်တီးသူများအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ပေးရောင်းချသူနှင့်အသေးစား developer များနှင့်အတူတစ်ဦး SuperMeet ဒစ်ဂျစ်တယ်ဟန်ပြအပါအဝင်ပြပွဲနှင့်ပြောထားသည်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2019-01-17
ယခင်: Pliant®Technologies ISE 2019 မှာCrewCom®ကြိုးမဲ့ခွားစနစ်များအတွက်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များကိုရည်ညွှန်းပြသ
နောက်တစ်ခု: Pikolo စနစ်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များ Partner EAS အချက်ပေးစီမံခန့်ခွဲမှုချောမွေ့စေရန်